Modern tranombakoka, lalan-tsara, ary ny traikefa foibe dia miarahaba vahiny amin'ny lahatsary vaovao Asehoy ny teknolojia sy Radiant eo anoloan'ny dizitaly fitantarana ao amin'ireo sehatra. Manokana natao ho an'ny vahoaka ny olana ny fametrahana toerana, Radiant LED Asehoy ny vahaolana hamonjy fofonaina-naka sary sy interactivity izay afaka misarika, manao, mampahafantatra, ary aingam-panahy mpitsidika toy ny mbola tsy nisy raha mbola maharitra famoronana fahatsapana ho an'ny andrim-panjakana sy ny marika.
Namirapiratra ny hoditry ny fahafaha-manao sy Service
Mba hanomezana ny iray-mijanona fanompoana, amin'ny famolavolana, R & D, vahaolana mialoha fivarotana mijery, fanamboarana, mivarotra, fametrahana, fiofanana sy ny tari-dalana ny teknolojia, rehefa avy-fanompoana fivarotana.
Museum dia faritra manokana ara-dalàna raha oharina amin'ny faritra hafa, amin'io faritra io dia azo namatsy amin'ny karazana LED Asehoy araka ny fangatahana hafa. Nentim-paharazana toy ny LED lamba teo amin'ny rindrina, mangarahara LED maneho teo amin'ny rindrina fitaratra sy malefaka LED miseho ao amin'ny tranombakoka foibe amin'ny endriny manokana. Manome vahaolana tsara indrindra isika eo ambany mpanjifa 'demand.Our Asehoy ny tena dia ho ampiasaina mba hanasongadinana ny vokatra' endri-javatra, flexibly sy mazava tsara ary aoka voasakantsakan'ny zavatra velona na dia ny tantara avy. Andramo vola ambany indrindra mahafeno ny vokany tsara indrindra.